Andiany Progressive Valves, Divider Distributors - fitaovana fanosotra
Valve Progressive Series - Mpizara mpizara
Home/Andiany Progressive Valves, Divider Distributors
Andiany Progressive Valves, Divider Distributors[email voaaro]2022-01-31T04: 10: 20 + 00: 00
Valve Progressive - Valve Divider Lubrication
Ny valva mandroso andiany dia antsoina koa hoe distribuer divider izay mamahana ny toerana ilaina amin'ny lubricant ary miasa amin'ny filaharan'ireo singa fanosotra. Ny habetsahan'ny menaka fanosotra na menaka dia azo zaraina tsirairay avy amin'ny menaka na fivoahan'ny menaka araka ny baiko voatondro ary aterina any amin'ny toerana fanosotra.
Misy singa mitambatra sy sakana amin'ny rafitra toy ny karazana valva mandroso sy mpaninjara fizarana, izay azo alaina araka ny fiasan'ny rafitra samihafa sy ny fitambarana samihafa. Ny famahanana fanosotra amin'ny tsingerina na akaiky tsy tapaka dia azo atao, ny famantarana ny asa azo fehezina dia afaka mampiseho ny fepetra fiasan'ny rafitra fanamainana.
HL -1 Injector, fitaovana fandrefesana andalana tokana
Famolavolana mahazatra ho an'ny fanoloana mora
Max. fanerena miasa 24Mpa/240bar
45# vy karbaona matanjaka
SSV Progressive Valve - Fizarana fanosotra
6 ~ 24 Outlets ho an'ny safidy
Max. fanerena miasa 35Mpa/350bar
Modely 3 ho an'ny fifantenana asa samihafa
Max. miasa tsindry 7Mpa ~ 210Mpa
Ny habetsahan'ny famahanana isan-karazany ho an'ny asa azo atao
PSQ Lubrication Distributor
Distributor sakana fizarana, 0.15 ~ 20mL / tsingerina
Max. fanerena miasa hatramin'ny 10Mpa (100bar)
Laharana fizarana 3 ka hatramin'ny 6pcs. SAFIDY
LV, JPQ-L Mpanome menaka fanosotra
Andalana mandroso, 0.16mL/cycle
Max. fanerena miasa hatramin'ny 20Mpa (200bar)
Outlet port avy amin'ny 6v ka hatramin'ny 12 nos. SAFIDY
JPQ Lubrication Distributor
Famatsiana andalana mandroso, 0.08~4.8mL/cycle
Habetsan'ny famahanana menaka samihafa ho an'ny safidy
ZP-A, ZP-B Mpanome menaka fanosotra
7 Taham-bolan'ny fifantenana
6 ~ 20 laharana seranan-tsambo ho an'ny safidy
Savaivony fantsona Ø4mm ~ Ø12mm